भारतमा नयाँ आतंक मच्चियो, नेपालमा पनि खतराको घण्टी ! « News of Nepal
कोरोनाको कहरबीच सोमबारदेखि भारतमा नयाँ आतंक मच्चिएको छ । त्यो आतंकको कारण अरु केही नभएर विनाशकारी किरा सलह पसेको हो । यतिखेर भारतको राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हुँदै अहिले महाराष्ट्रमा समेत सलहको प्रकोप देखिएको छ ।
राष्ट्रिय बाली तथा विषादी परीक्षण समितिको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र किट विज्ञान महासाखा, नार्कको संयोजकत्वमा सोबारे छलफल भएको छ । यदी सलह नेपाल प्रवेश गरिहाले के गर्ने र कसरी सुरक्षित गर्ने र प्रकोपको नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारे छलफल भएको वैज्ञानिक डा। अर्यालले जानकारी दिए । सो बारे अझै छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
डा. अर्यालका अनुसार डेजर्ट लोकस्ट झण्डै २०–२५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा उड्न सक्छ । तर यो समूहमा हिँड्ने भएकोले यसलाई सलह भनिएको हो । अहिले यो उष्ण हावासँगै पूर्वी क्षेत्रबाट पश्चिम क्षेत्रतर्फ लागेको छ ।
भारत सम्म आइपुगेको सलह यदि नेपाल प्रवेश गर्योे भने यहाँका कृषि बाली नालीहरु सबै सखाप पार्नेछ । सलहले सबै अन्न अनाज र उत्पादनहरु केही पनि नराख्ने हुँदा अहिले मकैको सिजन हुँदा मकै सखाप पार्ने र कृषकलाई नोक्सान गर्न सक्ने वैज्ञानिक डा. अर्यालको भनाइ छ । यतिसम्मकी सलहका कारण कृषि बाली नोक्सानी हुँदा मुलुकमा खाद्य संकटसमेत निम्तन सक्ने खतरा रहने उनको भनाइ छ ।
‘सलह निकै ज्याद्रो जीव हो । फैलिसकेपछि यसलाई नियन्त्रणमा लिन साह्रै गाह्रो हुन्छ । यो आफै हटेर नगएसम्म वा लोप नभएसम्म नियन्त्रणमा लिन गाह्रो हुन्छ । तर यसको प्रभावलाई कम गर्न भने केहि उपायहरु लगाउन सकिन्छ । जस्तो, किटनाशक विषादी प्रयोग गरेर मार्ने वा विभिन्न आवाज दिएर बालीको नजिक आउन नदिने होे ।
तर यो त्यति सजिलो छैन । लार्ज स्केल९ठूलो समूह०मा रहने सलहलाई विषादी प्रयोग गर्न समेत दमकल तथा हवाई सेवा नै प्रयोग गर्नुपर्र्ने हुन सक्छ । विकसित देशहरुले त अहिले पनि त्यसै गरिरहेका हुन्छन् । तर हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक र अशिक्षित किसानहरुका लागि यो निकै गाह्रो र महँगो विषय हो । यदि सलह आइहाल्यो भने नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ’ डा।अर्यालले भने ।